မတူ ထူးတဲ့ချစ်နည်း (အရမ်း မုန်း တဲ့ နည်းပါ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » မတူ ထူးတဲ့ချစ်နည်း (အရမ်း မုန်း တဲ့ နည်းပါ )
မတူ ထူးတဲ့ချစ်နည်း (အရမ်း မုန်း တဲ့ နည်းပါ )
Posted by Mobile House on Aug 22, 2011 in Entertainment | 16 comments
အရမ်းမုန်းတာ မို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ ကျွန်တော်ကောင်မလေး က ဒီလိုချစ်စေချင်တာတဲ့ ။ကျွှန်တော်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ် ။။ကျွှန်တော် မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ် ။စာအုပ်တအုပ်ထဲက ဖတ်မိတာပါ ။
ခေါင်းစဉ်မှာပါတဲ့(–)ထဲကစာက ဘာသဘောတုန်း။ စာတွေက ဖတ်လို့တော့ကောင်းသား။
အဲ့ နည်း တွေကြောင့် ရည်းစား နဲ့ ပြတ်သွား လို့ ပါ ။
နည်းဗျုဟာ က အကောင်းလွန်သွားတယ်ထင်ပ … ၊
မဟုတ်ဘူး သူ က လို ချင်တာ ။ကျွှန်တော် က မပေးနိုင်တာ
ရတာမလို လိုတာမရ သဘောမျိုးနဲ့တူနေတယ် ၊
သူမလို ချစ် တတ်နိုင်တဲ့ချစ်သူမျိုး ရချင်ပါတယ် ၊
မင်းသား က ဘာကိုမပေးနိုင်တာလဲ ဗျ..။
ကျွှန်တော် ပေးနိုင်တာ ၁၅၀၀ အချစ်ပါ။သူက အဲ့ ပုံပြင်ပြောပြတယ် ။ဘာသဘောနဲ့လဲ မသိဘူး။သူ လို ချင်တာ တော့ စဉ်းစားလို့ မရဘူး ။စဉ်းစားလို့ ရရင် ပြောကြ့ပါ။
အနက်ရောင်မင်းသားလေးရေ ဒီလိုပါဘဲလေ—-ဟိဟိ မပြောတတ်ပါဘူး။အချစ်ကြီးချစ်ကြတော့လဲ. ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဖတ်လို့ တော့ကောင်းသားနော်။လက်တွေ့ ဆန်တဲ့ အချစ်မျိုးပါဘဲ။
ကြိုက်တယ်ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့လို ချစ်ခြင်းမျိုးကိုပဲ သဘောကျတယ်ဗျာ……
မိန်းကလေး တွေကလေ သူတို့ကို အမြဲ ဂရုစိုက် မေးမြန်း ပြီး လို သမျှ ပြောသမျှ လိုက်လုပ်ပေးတဲ့သူကို ပဲ ဂရုစိုက်တယ် ထင်တတ်ကြတယ် ။ တချို့ ယောင်္ကျား လေးတွေက ပေါ်ပေါ်တင်တင် မဟုတ်ဘဲ အခုလို လေး တွေ လုပ်ပေးပြီးဂရုစိုက်တတ်တာလည်း ရှိတာပဲလေ ၊ အဲဒါ ကို ကောင်မလေးတွေ သေချာ မသိခင်မှာတော့ ဂရုမစိုက်ဘူး ၊ မချစ်ဘူး လို့ ပဲ ထင်မိတတ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်း သေချာ စဉ်းစား မိတဲ့ အခါ နားလည် သွားမှာပါ ။ ဘယ်သူမဆို ကိုယ်ချစ်လို့ ယူထားရင် တကယ် ဂရုစိုက်မှာပါ ။ မိန်းကလေး တွေကတော့ သိတဲ့အတိုင်း မိန်းကလေး စိတ်တော့ရှိတာပေါ့ ။ သူတို့ကို ဂရုစိုက်မှ ကျေနပ်တဲ့ သဘောရှိတယ်လေ ….. ဒါဆို သဘောပေါက်
“လူ့အလို ကြောင်မလိုက်နိုင်” လို့ စကားပုံပြောင်းပေးလိုက်ပေါ့။
နံပါတ် (၆) က ချောကလက် ကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဗျ လင်းစမ်းပါအုံး
ပါးစပ်နဲ့ ဟန်ဆောင်ပြီး ချစ်ပြနေတာထက် အခုလိုလေး ချစ်ပြတာကလည်းမဆိုးပါဘူး
ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေတော့လဲ မိန်းကလေးတွေက ဖွင့်ထုတ်ပြတ့ ချစ်ခြင်းတွေကိုလိုချင်တက်ကြပါတယ် ….
သြော်… ဖော်ဝေါ့တစ်ခေတ် ဆန်းသစ်လာပြန်ပြီ ထင်တယ်…..
ဖေမြင့် စာအုပ်ထဲပါတယ် ထင်တယ် ။မေ့ သွားပြီ ။ဖတ်ဖူးတဲ့ သူရှိမှာပါ ။